တရုတ် COVID 19 ပေးသွင်းသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သင့်သလဲ Guanglei
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူများသည် COVID ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သွားကြသည်ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့သိသည်။ ၁၉။ ဒါကငါတို့အနာဂတ်အတွက်လုံလောက်ပြီလို့ဆိုလိုတာလား။ တကယ်တော့ဘယ်သူမှငါတို့ဘယ်အချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုပ်လုပ်နိုင်၊ ငါတို့ရှေ့မှာခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုငါတို့မြင်နေရတုန်းပါ။ အိမ်တွင်းနဲ့အပြင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့သတိထားဖို့လိုတယ်။
၁။ ဖြစ်နိုင်လျှင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ သင်၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးချိန်းဆိုမှုကိုစီစဉ်ရန်အတွက်၊ အွန်လိုင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကာကွယ်ဆေးပေးသူများသို့သွားပါ။ အကယ်၍ သင်၏ကာကွယ်ဆေးထိုးချိန်းဆိုမှုကိုစီစဉ်ရန်မေးခွန်းရှိပါကကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသူအားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
2. အကယ်၍ သင်ထွက်သွားချိန်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်အချိန်၌ပင်မျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်ဆင်ပါ။ Covid-19 သည်သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းစွာကာကွယ်ရန်အပြင်ထွက်ရန်တကယ်လိုအပ်လျှင်မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားရန်တိုတောင်းသောအချိန်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၃။ အိမ်တွင်းလေသန့်စင်စက်ကိုသုံးပါ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအနေဖြင့် COVID-19 သည်မျက်ခုံးများမှတဆင့်ပြန့်နှံ့သွားသည်။ လူများသည်နှာချေခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးသောအခါရေ၊ ချွဲနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အမှုန်များပါ ၀ င်သောအရာများကိုလေထဲကိုထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ အခြားလူများကထိုအစက်များကိုရှူရှိုက်မိပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကသူတို့ကိုကူးစက်စေသည်။ လေ ၀ င်လေထွက်ညံ့ဖျင်းသောလူနေထူထပ်သောနေရာများတွင်အန္တရာယ်သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အောက်တွင် HEPA filter, anion နှင့် UV sterilization ရှိသောလူကြိုက်များသော Air Purifier ဖြစ်သည်။
၁) HEPA filtration သည်အမှုန်များကို COVID-19 ဖြစ်ပေါ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်အရွယ်အစား (နှင့်အလွန်သေးငယ်သည်) ထိရောက်စွာဖမ်းယူသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော ၀.၁၁ မိုက်ခရွန် (၁၀ နာနိုမီတာ) နှင့်အထက် HEPA filter များ၊ အရွယ်အစား ၀.၀၁ မိုက်ခရွန် (၁၀ နာနိုမီတာ) နှင့်အထက်အတွင်းရှိအမှုန်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ COVID -19 ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်သည်အချင်း ၀.၁၂၅ မိုက်ခရွန် (၁၂၅ နာနိုမီတာ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် HEPA filter များထူးကဲစွာထိရောက်စွာဖမ်းယူနိုင်သည့်အမှုန်အရွယ်အစားအတိုင်းအတာအတွင်းကျသည်။
၂) Air Purifier တွင် ionizing filter ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လေကြောင်းမှကူးစက်သောတုပ်ကွေးများကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ရန်ကူညီသည်။ အိုင်းယွန်းသည်အိုင်းယွန်းများကိုထုတ်လွှတ်သည်။ လေထဲတွင်လေအမှုန်များ / aerosol မျက်ရည်စက်လေးတွေအားအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်စေပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်သူတို့ကိုအပြုသဘောဖြင့်အားသွင်းထားသောစုပေါင်းပြားသို့ဆွဲဆောင်သည်။ ဒီကိရိယာသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုလေထဲကနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်ပြီးလေထဲမှာပျံ့နှံ့နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုတစ်ပြိုင်နက်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးကာကွယ်နိုင်တယ်။
3) အမျိုးမျိုးသောသုတေသနပြုချက်များအရကျယ်ပြန့်သော UVC အလင်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုသေစေပြီး၎င်းကိုလက်ရှိတွင်ခွဲစိတ်စက်ကိရိယာများကိုမသန့်ရှင်းစေရန်အသုံးပြုသည်။ ဆက်လက်၍ သုတေသနပြုချက်အရ UV ဓါတ်ရောင်ခြည်သည် H1N1 နှင့်အခြားဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအမျိုးအစားများနှင့်အတူ SARS-COV ဗိုင်းရပ်စ်ကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
လေသန့်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ အသေးစိတ်များနှင့်အထူးလျှော့စျေးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာ Air ကိုစင်ကြယ်စေ Uk , ခရမ်းလွန်မူလစာမျက်နှာ Air ကိုစင်ကြယ်စေ , မူလစာမျက်နှာ Air ကိုစင်ကြယ်စေ, မူလစာမျက်နှာများကိုပုံ ထား. များအတွက် Air ကိုစင်ကြယ်စေ, အိုဇုန်း Air ကိုစင်ကြယ်စေ Home Depot , သဘာဝကြားနေမူလစာမျက်နှာ Air ကိုစင်ကြယ်စေ ၊ အားလုံးထုတ်ကုန်များ